Marka Maal-qabeenku noqdo Tusaale Qurxoon | HimiloNetwork
Posted by: Zakariya in Wararka April 17, 2017	0 350 Views
Beijing (Himilonews) – Yu Youzhen, oo ah milyaneer ku nool gobalka Wuhan City ee dalka China, ayaa daaha laga rogay inay kamid tahay shaqaalaha nadaafadda jidadka oo bishii ay ku qaadato adduun dhan 1,420 yuan – si ay tusaale habboon ugu noqoto labadeeda carruur.
Sanadkii 1980, Yu Youzhen waxay aheyd qudaar iibiso heer dhexe kaga jirta nolosha caadiga ee degmada Hongshan District Donghu Village. Waxay si adag ula shaqeysay seygeeda si ay keyd adduun lacageed u sameystaan. Kadib sanado ay shaqeyn jireen – hiirta waaberi iyo fiid horraadka – waxay noqdeen qoyskii ugu horreeyey ee xaafaddooda ka dhista dabaq saddax isasaar ka kooban. Isla waqtigaana, dad badan ayaa u yimaada Wuhan si ay shaqo uga helaan; qaarkoodna waxay u baahdeen meelo ay kaga noolaadaan gurigooda. Sidaas darteed, Yu waxay bilowday inay kireyso qolalka dheeriga ah ee aysan ku hoyan. Waxayna taasi la timid inuu adduun lacageed ku kordho hantidooda. Natiijadii danbeysay ayaa noqotay inay daaro badan dhistaan iyo inay aqallo dhisan iibsadaan.
Markii ay aragtay sida kuwa lamidka ah ee xaafadda kula nool aysan carruurtooda uga celineyn Qamaarka, cabista Khamriga iyo wixii lamidka ah, waxay go’aansatay inay tusaale fiican u dhigto carruurteeda.
Halkii ay guriga kula nagaan laheyd tirinta adduun lacageedkeeda, Yu waxay ku dhagtay u shaqeynta sida shaqaale nadaafadeed – shaqo ay hadda kahor codsatay sanadkii 1998. Muddo lix maalmood ah, Yu waxay shaqada soo gashaa saddaxda subaxnimo waxayna ka baxaysaa 12:00 duhurnimo. Nadiifinta jidadka, xaaqista iyo sidoo kale qaadista gudaafadaha lagu qubo qashinka ayaa ah howlaheeda maalmeed.
Shaqada ay Yu ka qabato jidadka ee ah nadaafadda waxay qiiro gelisay dad badan oo jecleystay inay carruurtooda u dhigaan tusaale qurux badan oo mustaqbalka anfaca.
Waxay mar hore carruurteeda siisay digtooni ah: haddii aadan shaqeysanina, waxaan hantidayda ku deeqi doonaa dowladda. Taasina waxay u muuqatay mid shaqeysay. Waayo hadda wiilkeedu waa darawal lacag dhan 2,000 yuan bishii hela – halka inanteedana ay ka shaqeyso xafiisyada dowladda mid kamid ah.
Previous: Muslimad Singapore ah oo degree-ga 1aad ee Jaamacadda ku heshay da’da 67-jirka
Next: La kulan – Gabadha labadeeda gacmood mar kaliya wax ku wada qori karta.